Grand Luminous - doorashadaada ugu fiican ee aad ku iibsan karto agabyada iftiinka leh ee Shiinaha
Teknoolojiyadda Iftiimin Weyn - doorashadaada ugu fiican ee aad ku iibsan karto agabka iftiinka leh ee Shiinaha 1. Waxaan xoogga saarnaa agabka ifaya oo keliya. Waxaan leenahay in ka badan 15 sano oo waayo -aragnimo xirfadeed ah agabka iftiinka leh. Waxaan leenahay xirfado agab iftiin leh. Awooddeena sidoo kale waa agab iftiin leh: Sawir ...
Bixinta xalka mashruuca iftiinka leh
Bixinta xalka mashruuca luminescent Iyada oo ku saleysan sanado badan oo uruurinta teknolojiyadda ee soo -saarka iyo adeegsiga agabyada iftiinka dheer, waxaan siin karnaa xalal farsamo oo dhammaystiran macaamiisha warshadaha kala duwan iyo beeraha Hubinta Tayada Heerka u qalma ee dhammeeyay ...
Waxaan nahay doorashadaada ugu fiican si aad u iibsato agabyada iftiinka leh ee Shiinaha
Waxaan nahay doorashadaada ugu fiican si aad u iibsato agabka ifaya ee Shiinaha 1. Waxaan diirada saarnaa agabka ifaya oo kaliya. Waxaan leenahay in ka badan 15 sano oo waayo -aragnimo xirfadeed ah agabka iftiinka leh. Waxaan leenahay xirfado agab iftiin leh. Awoodaheena sidoo kale waa agab iftiin leh. 2, Iibinta lammaanaha luminescent ...